बार एसोसिएसनको चुनाव : अधिकारी र पोखरेल भिड्दै | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बार एसोसिएसनको चुनाव : अधिकारी र पोखरेल भिड्दै
२०७७ कार्तिक ५, बुधबार ०८:१९ गते
भरतपुर । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन चितवन शाखाको नयाँ नेतृत्वका लागि कात्तिक २१ गते चुनावको मिति तय गरिएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिएलए) र प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डिएलए) प्यानल नै बनाएर प्रचारप्रसारमा होमिएका छन् । दुवै प्यानलमा पुराना, हाल क्रियाशील र नयाँ अनुहारहरु समेटिएका छन् ।
पिएलएको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा रामकृष्ण अधिकारीलाई उमेदवार तोकिएको छ । यस समूहको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र देवकोटा, सचिवमा विनोद मिश्र, कोषाध्यक्षमा बद्रीनाथ पण्डित, सहसचिवमा शोभा भट्टराई उमेदवारका रुपमा अघि सारिएको छ ।
पिएलएको तर्फबाट सदस्यहरुमा कुलचन्द्र खनाल, जनकराम पौडेल, रामनाथ घिमिरे, कृष्णप्रसाद पन्त, अजयकुमार तामाङ, विकास गुरूङ, सपी मिया र कल्पना लोहनी रहेका छन् । केन्द्रीय पार्षद्मा टेकनाथ अधिकारी, तुलसीराम पाण्डे, शिवराम महतो, नुनराज सिलवाल, पासाङ लामा, वामदेव अधिकारी, जीवनज्योति विश्वकर्मा र नारायण गिरी रहेका छन् ।
डिएलएतर्फबाट अध्यक्षमा डा. हरिहर पोखरेल, उपाध्यक्षमा मुन्नाविक्रम खाती, सचिवमा श्रीराम दवाडी, कोषाध्यक्ष बलराम पौडेल र सहसचिवमा पृथ्वीदेवी सुवेदी उमेदवार रहेका छन् । सदस्यहरुमा तृष्णा न्यौपाने, शेखरनाथ पोखरेल, हरिहर दवाडी, वासुदेव आचार्य, सुरेन्द्रराज सुवेदी, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, तीर्थराज पोखरेल, विष्णुहरि कोइराला रहेका छन् । केन्द्रीय पार्षद्मा हिरादत्त तिवारी, गोविन्द गौतम, दिवाकर भूषाल, रामचन्द्र भट्ट, लोकनाथ शर्मा, पदमकुमार श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र चापागाईं र गोमा न्यौपाने भण्डारी रहेका छन् । दुई वर्षअघि भएको चुनावमा पिएलएको तर्फबाट उमेदवार बनेका कमल पाठक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
पिएलएतर्फका अध्यक्ष पदका उमेदवार रामकृष्ण अधिकारीले कानुन व्यवसायीको पेसागत सुरक्षा र क्षमता विकास गराउनका लागि आफूले अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएको दाबी गरे । अध्यक्ष पदका उमेदवार अधिकारीले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदिको संरक्षण गर्न आफू लागिपर्ने बताए । डिएलएका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उमेदवार डा. हरिहर पोखरेलले पुराना कानुन व्यवसायीलाई सम्मान र अनुभव हस्तान्तरण, हाल क्रियाशील रहेकालाई लगनशील र नयाँ पुस्तालाई स्थायित्व प्रदान गर्न आफू चुनावी मैदानमा होमिएको बताए ।